Photoshop yeIpad ichawedzera rutsigiro rweRAW | IPhone nhau
Photoshop yeIpad ichawedzera rutsigiro RAW
Kana isu tichitaura nezvekutora mifananidzo, kushandisa RAW fomati inobvumira mapikicha kuchengetwa pamwe nekwanisi ye gadzirisa hunhu hunoshandiswa pakubata, iyo inotibvumidza kuti tivashandure kuitira kuti vagadzirise chaizvo pane izvo zvataida kutora kana mhedzisiro yekutanga yanga isiri iyo yaidiwa.
Photoshop paPC neMac ndiyo inoshandiswa zvakanyanya kushandiswa munyika yekugadzirisa mifananidzo uye yatinokwanisa shanda nemafaira muRAW fomati pasina chero muganho. Nekudaro, iyo iPad vhezheni ye Photoshop haitsigire iyi fomati, zvirinani kwenguva pfupi.
Adobe yakazivisa Photoshop yePadad ichawedzera mune ramangwana kugadzirisa RAW faira rutsigiro, iyo inobvumidza vashandisi kushanda nemifananidzo yakasvibirira, sezvo ivo vachiratidzwa pachiratidziro chemudziyo unovatora. Photoshop ichapa rutsigiro kubva kuDNG fomati kune Apple ProRAW.
Kubva kuDNG kuenda kuApple ProRAW, vashandisi vanozokwanisa kuendesa nekuvhura kamera RAW mafaera, kugadzira zvigadziriso senge kuratidzwa uye ruzha, pamwe nekutora mukana wekusagadzirisa nekugadzirisa otomatiki pamafaera akasviba, ese ari paIpad.
Kamera RAW mafaera anogona kugadziriswa zviri nyore pane nhunzi uye ivo vanoendeswa kunze se ACR smart zvinhu. Iyi nzira inobvumidza vashandisi kuvhura yavo yakarongedzwa faira mu Photoshop yeMac kana Windows uye vachiri kuwana yavo yakadzamidzirwa faira mbichana uye chero gadziridzo yakaitwa pairi.
Muvhidhiyo inotevera, vakomana vanobva kuAdobe vanotiratidza mashandiro anoita Adobe Kamera RAW maficha mu Photoshop ye iPad.
Zvinoenderana ne kuburitsa zuva reiyi nyowani mashandiro, panguva ino hazvizivikanwe, saka zvakafanana zvinotangwa mumavhiki mashoma anouya gore rinouya. Kuti ushandise Photoshop yeIpad, unofanirwa kubhadhara kunyoreswa pamwedzi, nekuti Adobe haipe mukana wekukwanisa kuwana iyo application nemubhadharo mumwe chete, chimwe chinhu chingazokurudzira kushandiswa kwesicelo pakati pevashandisi vePadad.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » Photoshop yeIpad ichawedzera rutsigiro RAW
Tiny Wings + richava rinotevera zita rekumhara paApple Arcade
Apple inotangisa mabheji echina evanogadzira iOS 15.1 uye mamwe masisitimu anoshanda